Madaxweynaha Puntland: “Haddii aan cashuurta la bixin dowladnimo ma jireyso”DAAWO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweynaha Puntland: “Haddii aan cashuurta la bixin dowladnimo ma jireyso”DAAWO
July 14, 2017 - By: HORSEED STAFF
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta Jimce ah shir Jaraa’id oku qabtay aqalka Madaxtooyadda magaalada Garoowe. SHirka jaraa’id ayaa Madaxweynuhu uga hadlay cashuuraha laga doonayo in ay muwaadiniinta reer Puntland bixiyaan.
Dr. Cabdiweli Gaas ayaa ugu horayn shacabka reer Puntland u sheegay in haddii aan cashuurta la bixinin aanay dawladdnimo jiraynin.
Madaxweynaha ayaa shirkiisi saxaafadeed ku sheegay in dawladda ay u taalo hawlo badan oo ay masuuliyadi ka saaran tahay, taas oo ay ka mid tahay sugida ammniga, bixinta mushaharaadka iyo horumarinta dalka, waxaana ay taasi suura gelaysaa marka ay iskaashadaan shacab iyo dawladduba. Madaxweynaha Puntland ayaa cadeeyey in shacabka Puntland aan laga qaadin wax cashuura ee keliya dawladdu ay qaado khidamaad yar oo dekedda ka soo xerooda, waxaana uu madaxweynuhu faahfaahiyey cashuurta ay ka doodayaan ganacsatadda magaaladda Boosaaso ay tahay 4% mid waajibtey hantiilaha gurriga (landlord) oo u dhiganta lacagta dollar-ka $28.
Madaxweynaha Puntland ayaa ganacsatada qaarkood ku eedeeyey in ay lacago baad ah ama canshuur siiyaan al-Shabaab waxaana uu yiri:
Ugu danbayntii, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shacabka Puntland kula dardaarmay kuna booriyey in ay nidaamka dhawraan, inay midnimadoodda adkaystaan, in cidii shidda wadda ay ka horyimaadaan iyo in cashuurtu waa waajibe ay bixiyaan.